Ukraine: Russia Ciidan Badan ayay Xadka Dhigtey
Gaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay in Russia ay si lixaad leh u kordhisey ciidamada ka jooga xadka ay la leedahay Ukraine maalmihii dhowaa, iyadoo haatan tirada guud ee halkaasi ka joogta ay gaareyso 20,000 oo wata taankiyo isuguna jira ciidamada lugta, ciidamada gaarka ah iyo diyaaradaha dagaalka.
Sarkaal ka tirsan NATO ayaa hadalkan ka shaaciyey maanta magaalada Washington. Dhanka kale sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa VOA u sheegay in Russia ay hub badan u daabuleyso dhinaca xadka, hubka ay halkaa geyneysana ay ka mid yihiin taankiyo iyo qalabka gantaallaha laga rido.
Afhayeen u hadley guddiga qaranka ee difaaca iyi nabadgelyada Ukraine Andriy Lysenko, ayaa sheegey in Russia ay xadka Ukraine soo dhoobtey 45,000 oo askari, dhowr taanki, hubka culus, qalabka gantaallaha laga rido iyo diyaaradaha dagaalka.
Lysenko ayaa sheegay in saddex ka mid ah ciidamada Ukraine la diley, 46 kalena la dhaawacay dagaal ay gooni u goosadka Russia taabacsan kula galeen bariga Ukraine 24-kii saac ee la soo dhaafey.
Waxaa kale oo uu sheegay in ciidamada Russia ay hubka culus iyo gantaallo ku soo rideen saldhigyada ciidamada Ukraine ee xadka ku yaalla shaley.